र्‍याप हान्ने काम भिटेनको, उखानटुक्का हान्ने काम केपी ओलीको ! – Khabar Silo
भिटेनले डण्ठे बाहेक, उध्रेको तुना तान्छु पनि भनेका छन् । ‘आऊ न यता यता, अलि यता यता’ भन्दै होटलको खाट पनि भाँच्छु भनेका छन्। यो उनको भन्ने शैली हो । सुन्ने नसुन्ने त्यो श्रोताको कुरा हो । म जीवन शर्माको ‘सिमली छाँयाले’ धेरै सुन्छु, त्यो मेरो रोजाइ हो । कतिपयले शिव परियारको ‘क्या दामी भो’ र ‘पिलायो साथीले’ भन्ने सुन्छन् । त्यो उनीहरूको कुरा हो । पल्लाघरे काकाको छोराले भिटेनको ‘मान्छे खत्तम’ भन्ने गीत सुन्छन्, त्यो उनको कुरा भो । अहिलेका युवा ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ मन पराउँछन् उनीहरूको मर्जीको कुरा भयो । यहाँ कसले कसलाई यो सुन, त्यो नसुन भनेर डिक्टेट गर्ने क्या !
कतिपय हिन्दी चलचित्रहरूमा मात्र हैन हलिउडमा पनि प्रहरीको चरित्रलाई कसरी देखाइएको हुन्छ ? अपराधीहरूको नाइके जस्तो देखाइएको हुन्छ । तर के अब भारतीय प्रहरीहरू कलाकारलाई समात्दै हिँड्छन् त ? कलाकारको कलाकारिता हो, जसका उपर पनि लक्षित हुन सक्छ नि!
सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी दबाब आएपछि प्रहरीले आफ्ने निर्णयलाई सच्याएर भिटेनलाई धरौटीमा रिहा गर्‍यो ।ल, मानौं भिटेन र दुर्गेश त छाडा भए रे, तर चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै हो छुट’ बोलको व्यङ्ग्यात्मक गीतले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खैलाबैला मच्चिएको थियो
सिम्खडाले शासकहरूको राम्रै हुर्मत काढ्ने गर्थे । के भजनमण्डलीहरू मात्रै यस राज्य व्यवस्थाका असली संगीतकर्मी हुन् त ? (लोकान्तर डटकमबाट)